Dzidziso Yekuvanzika - Alietc.com
Ruzivo rwePolisi mugwaro urwu runoenderana neruzivo chero rwewunotipa isu, rwemunhu neke bhizinesi, neruzivo rwatinounganidza otomatiki kana kubva kune vechitatu mapato.
Ruzivo rweSecurity yega yega ruzivo zvinoenderana nemutemo wepasi rese, uye zvichidzika nekuchinja nekugadziridzwa sezvinodiwa. Nekushandisa yedu saiti uye kubvumirana neMitemo yedu neMagariro, iwe unonyoresa uye unobvuma kune inotevera ruzivo kuchengetedza, kugovana uye kuchengetedza mutemo sekushanda pasi pe ALIETC.com.
Kukundikana kubvuma kana kutevedzera zvinotaurwa mugwaro iri kunozoguma nekumiswa basa, kana kurambidzwa kuaccount yako. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve yedu mutemo chirevo kana Mitemo uye Mamiriro, tapota taura nemutengi webasa mubatsiri.
Iwe unozobvunzwa kuti upe ruzivo rwemazita runodikanwa kuti ufambise zviitiko zvebhizinesi pane yedu saiti. Kunyoresa pachikuva chedu kunoda kuziviswa kwezita rako, kero, nhamba yefoni, zita rebasa uye dhipatimendi (kana paine zviripo).
Iwe uchakumbirwa kupa ruzivo rwezviziviso uye chero chinhu chine hukama nemhando yebhizimusi rako, rakadai sezita rekambani, bhizinesi mhando uye rezinesi rekutengesa.
Kufumura uye kugovera ruzivo
Tinogona kuburitsa chero ruzivo rwakatunganidzwa uye rwakachengetwa kune vanotevera vanotevera:
Nhengo dze ALIETC Boka uye vanobatana navo uye / kana vanosarudzwa vanopa sevashandi vanoshanda pamwe nesu kuendesa zvinhu nemasevhisi.
Isu Bhizinesi Redu
Vakabhadhara kubhadhara vanoita
Vatengi vevamiriri vebasa, kuti vakwanise kupa sevhisi uye yakakosha yekutarisira rubatsiro.
Vanodzivirira panjodzi vanopa, kuitira kuti vaongorore kuchengetedzeka kwevashandisi maakaunti uye kutapurirana.
Vatungamiriri vemitemo, magweta eruzivo, vamiririri vehurumende, ma insurerenzi uye nemamwe masangano anotungamira mukuteerana nemitemo inoshanda uye kushandisa, kumisikidza nekudzivirira kodzero yedu yepamutemo nekudzivirira zvaunoda zvakakosha uye nezvevamwe vanhu.
Kuki chinhu chidimbu diki che data chinenge chakachengetwa pakomputa yako hard drive kuburikidza newebhu web browser. Cookies set yangu ALIETC.com inofanirwa kumhanya webhusaiti zvakanaka nekutarisa yako saiti zviitiko uye kukurudzira zvinhu nemasevhisi. Makeji emakuki anodzimwa kana iwe ukavhara browser, uye makuki anoenderera mberi anoshandiswa kukuratidza. ALIETC inoshandisa ese maviri musangano uye anoshingirira makuki.
Isu tinochengeta yako yega uye yebhizimusi ruzivo rwemazuva ese isu tichichengetedza zviri pamutemo bhizinesi hukama. Isu tinosungirwa kuti tidaro kuitira kuti tiendese zvinhu nemabasa sezvatakavimbiswa mukuzivisa kwedu.
Kana iwe ukasarudza kupedzisa bhizinesi rako ne ALIETC.com uye kuvhara account yako, zvese zvine chekuita newe pachedu nekambani ruzivo zvichabviswa. ALIETC.com ichabvisa kana kusazivisa ruzivo zvichienderana nekuti yako account yakabviswa zvachose here kana kumiswa (egameni remutengi we ALIETC.com services).
Kana nekuda kwechikonzero chero chako ruzivo kana rwekambani ruzivo ruchinge rusina kubviswa nekukasira (mune zviitiko apo ruzivo rwakachengetwa mumashure-ekuchengetedza zvinyorwa) ruzivo rwakarongeka ruchasiyiwa kubva mukuenderera mberi kwekugadzirisa kusvikira ruzivo rwakakwana rweruzivo rwasvika.